ANTSAN’NY RADIO TENY FIAINANA (ARTF) - RADIO TENY FIAINANA
Hihaino radio mivantana Your browser does not support the audio element.
ANTSAN’NY RADIO TENY FIAINANA (ARTF)Admin001@20182018-03-03T12:15:32+00:00
1- Iza moa ny ARTF
– Antoko Mpihira izay najoro ao amin’ny Radio Teny Fiainana araka ny teny fanevan’ity farany manao hoe : « Asandrato mafy ny feonao, asandrato fa aza matahotra » tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Isaia 40 : 9b
– Antoko Mpihira mihira ny fihirana FFPM araka ny tiona vaovao izay nivoaka nohon’ny fijoroan’ny komity FFPM momba ny fanitsiana ny tiona.
2- Ny tantarany
Fiforonana Janoary 2011
Nahazo sata sy fitsipika 2013
Niditra studio voalohany 2014
Nanokana fanamiana sy nahazoana tsodrano tamin’ny Synodam-paritany Antananarivo May 2016
Namboatra fanamiana fanampiny Marsa 2017
3- Ny mpikambana birao
Filoha : ANDRIANASOLO Olivier
Filoha lefitra : RANDRIANAIVOSOA René
Mpitahiry vola : RAHARIVOLOLONA Joséphine
Chef de chœur : RAKOTONDRAINIBE Andriamparany
Mpitantsoratra I : RAVELONARIVO Norovoahangy
Mpanolotsaina : RAZAFINIRIANA Noro, RAMAMONJISOA Tahina, RASOANIRINA Eliette Haingomalala, ANDRIANARIJAONA Yves
Mpitendry mozika : RAKOTOARISOA Eric
4- Ny tanjon’ny Fikambanana
– Manandratra ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny fo sy ny feo,
– Mihira ny fihirana FFPM amin’ny tiona nahitsy,
– Mamoaka hira folo isan-taona,
Hira manambara ny antson’ny filazantsara, ny asan’Andriamanitra sy ny sitrapony amintsika mpanompony, azo bangoina amin’ny fitoriana ny filazantsara sy ny fampaherezana ny mpanompony.
5- Ahoana no hanatanterahana izany
Ny fanomanana izany dia isaky ny sabotsy amin’ny 1 ora ka hatramin’ny 2 ora sy sasany tolak’andro ao amin’ny FLM Ambatovinaky akaiky ny ankany, mba hitsinjovana ny fandaharam-potoanan’ny mpikambana ny sabotsy tolak’andro.
6- Inona avy ireo zava-bita
Tamin’ny aprily 2016 no nivoaka ny CD andiany voalohany (Jehovah Ray mahari-po) ary notokanana ny fanamiana ny volana May 2016, ka isaorana ny Tompo. Ny volana jolay 2017 kosa no : nivoaka ny CD andiany faharoa (He manda fiarovana), ka nisy fiaraha-mivavaka, antsa an-kira namoahana azy io tamin’ny 12 aogositra 2017 niaraka tamin’ny Antoko Mpihira maro. Isaorana ny Tompo koa izany.
Ny asa natao koa dia ny fanafanana ny hetsika rehetra nataon’ny Radio Teny Fiainana dia ny Antsam-piderana, ny sakafo AGAPE.
Nisy koa ny fanafanana fotoana tamin’ireo hetsika seho an-tsehatra nokarakarain’ny Rantsana tantaran’ny Radio Teny Fiainana : miara-miasa amin’ny Rantsana tantara ny ARTF.
7- Ny fivelaran’ny asa
Mikasa hanao Tafika Masina ny ARTF amin’ity taona ity, amin’ny volana aogositra 2018 any Mahavelona, satria tsy mijanona amin’ny toerana iray ny iraka hanirahan’ny Tompo, mila taomina ny olona hidera an’Andriamanitra, hankamamy ny hira fihirana FFPM sy hikalo ao am-po ho an’ny Tompo, hangetaheta sy handray ny famonjena nentin’ny Tompo.
Mila fanomanana, fiofanana ary fitondrana amim-bavaka izany, asa izay tsy mbola notanterahana teo aloha.
Raha ny isan’ny mpikambana ato amin’ny ARTF dia tena mbola vitsy tokoa, na eo amin’ny lafiny mpihira na eo amin’ny lafiny tekinika : tsy manana mpisolo toerana ny chef de chœur, toy izany koa ny mpitendry mozika, izay hita fa be andraikitra any amin’ny fikambanana hafa.
Ny Alahady 18 febroary 2018 lasa teo tao amin’ny FJKM Manarintsoa Finoana, tamin’ny fitondrana amim-bavaka ny asa hatao amin’ity taona 2018 ity no nanasana mpikambana vaovao hiditra ao amin’ny ARTF : mbola mitohy ny fanasana mpikambana vaovao fa mbola vitsy no namaly ny antso (6), ary tsy misy manana talenta mampianatra hira na mitendry zava-maneno ireo namaly ny antso tamin’io fotoana io ireo.
8- Ny laharana finday hifandraisana amin’ny ARTF
Filoha : ANDRIANASOLO Olivier 034 73 024 74 na 032 04 675 84
Filoha lefitra : RANDRIANAIVOSOA René Tel 033 12 854 25